July 30, 2019 - Book News Madagascar
Fadin-tseranana – Nahazo fitaovana hiarovana amin’ny “radioactivité” ny seranam-piaramanidina Ivato
Natao hiarovana ny vahoaka sy ny Firenena ny fisian’ny “détecteur portable”. Fitaovana izay nomen’ny “Agence Internationale de l’Energie Atomique” ho an’ny fadin-tseranana. Fiarovana amin’ny « radioactivité » Manamafy ny fiarovana ny sisin-tany ny fadin-tseranana. Isany andraikiny ny fiarovana ny vahoaka, toa ny fiarovana amin’ny voka-dratsy hateraky ny “radioactive”. Efa manana fitaovana hiarovana Read more…